डा. कोइराला भन्छिन, ठूलो जोखिम मोलेर पेट स्क्यान ल्यायौ - Health Today Nepal
डा. कोइराला भन्छिन, ठूलो जोखिम मोलेर पेट स्क्यान ल्यायौ
June 24th, 2016 अन्तर्वार्ता0comments
कसरी भित्रियो पहिलो पटक नेपालमा पेट स्क्यान मेसिन . यसका पछाडि केही व्यक्तिको समय, मेहनत र लगानी लागेको छ । सानो जोखिम मोलेर ल्याइएको होइन । के भन्छिन, वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट एवं सूर्या डाइग्नोस्टिककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. कृतान्जली कोइराला । हेल्थ टुडेले डा. कोइरालासंग गरेको छोटो संवाद
अहिलेसम्म कसैले ल्याउन नसकेको पेट स्क्यान मेसिन कसरी ल्याउनु भयो
नेपालमा यो सेवा अत्यावश्यक थियो । तर महँगो भएकाले भित्रिन सकेको थिएन । यो सेवा भित्र्याएर क्यान्सरका बिरामीलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोचिरहेका थियौं । हाम्रो सम्पर्क भारतको चेन्नईमा रहेको सूर्या हस्पिटलसँग भयो । हाम्रो प्रस्तावमा उहाँहरू सहमत हुनुभयो । उद्योगति रूप ज्योति र सत्यम पाठक पनि सहकार्य गर्न राजी हुनुभयो । सूर्या हस्पिटल र उहाँहरूको सहकार्यमा यो सेवा नेपालमै उपलब्ध गराउन सकेका हौं ।
कति प¥यो यो मेसिनको मूल्य
एकदमै महँगो रहेछ । मेसिनको मात्र १२ करोडभन्दा बढी प¥यो । यसमा प्रगोग हुने विशेष औषधि हरेक पटक मुम्बईबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले महँगोका साथै जोखिम बढी छ ।
पेट स्क्यानले क्यान्सर फैलावटको अवस्था कसरी पत्ता लगाउँछ
क्यान्सरको शंका लागेपछि मात्र यो परीक्षण गर्ने हो । मानिसको शरीरमा क्यान्सर कहाँकहाँ फैलिएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पेट स्क्यान चाहिन्छ । यसले क्यान्सर फैलावट देखाउँछ । अत्याधुनिक प्रविधि भएकाले शरीरका कुनै पनि भागमा सानोभन्दा सानो क्यान्सर फैलिएको भए पनि यसले सूक्ष्म रूपले देखाउँछ ।
क्यान्सर फैलावटबाहेक पेट स्क्यानले के काम गर्छ
अरू रोग पहिचानमा पनि काम गर्छ । उपचारपछि क्यान्सरमुक्त भए नभएको पत्ता लगाउने काम गर्छ । औषधि सेवन गरिरहेको अवस्थामा औषधिले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि काम लाग्छ । क्यान्सर कुन स्टेजमा पुगेको रहेछ भन्न थाहा हुन्छ । यसले बिरामी र आफन्तको खर्च र हैरानी कम हुन्छ ।
पेट स्क्यान गरेको शुल्क कति लाग्छ
यो प्रविधि नै महँगो छ । हरेक पटक यसमा प्रयोग हुने औषधि मुम्बईबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले अझ जोखिम छ । एक पटक पेट स्क्यान गरेको करिब ६५ हजार पर्छ । विदेशमा लाग्ने खर्चभन्दा यो शुल्क न्यून हो ।
विपन्नका लागि कुनै सहुलियत छैन
हो, हामीले विपन्नका लागि विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था गरेका छौ । चिकित्सकले सिफारिस गरेका त्यस्ता बिरामीलाई तिर्नैपर्ने चार्जबाहेक शुल्क नलिने योजना बनाएका छौं । सरकारले औषधिमा लाग्ने कर छुट गरिदिए योभन्दा सस्तोमा सेवा दिन सकिन्छ ।
पेट स्क्यानको रिपोर्ट आउन कति दिन लाग्छ
दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउँछौं । यसमा कुनै समस्या छैन ।
तपाईंको अपेक्षा के छ
हाम्रो अपेक्षा भन्नु नै बिरामीले सुलभ शुल्कमा स्वदेशमै सेवा पाउन भन्ने हो । गुणस्तरीय सेवा दिन हामी तयार छौं । सिर्फ हामीलाई विश्वास चाहिएको छ । यति ठूलो जोखिम मोलेर स्वदेशमा सेवा दिँदासमेत विदेश नै जानु भएन । हाम्रो भन्नु यही हो । अपेक्षा पनि यही हो ।
Previous article ब्रस गर्दैमा मुख स्वस्थ हुन्न
Next article पक्राउ परिने डरले सयौं डाक्टर गायव